प्रायः सोधिने प्रश्न - प्राय: सोधिने प्रश्न - एचएचओ कारखाना
घर > प्रायः सोधिने प्रश्न - प्राय: सोधिने प्रश्न
प्रायः सोधिने प्रश्न - प्राय: सोधिने प्रश्न
अक्सर सोधिने प्रश्नहरू - HHO KITS सुपर थिन HHO X-CELL प्लग 'एन प्ले र DIY हाइड्रोजन उपकरणहरू
मेरो कारको हुड मुनि धेरै स्थान छैन। म कहाँ HHO किट HHO सेट HHO ग्यास जेनरेटर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ जहिले पनि HHO KIT स्थापना गर्न सकिन्छ। हाम्रो सुपर पातलो हाइड्रोजन जेनरेटर एक्स-सेल बजारको सबैभन्दा सानो हो, मोटरसाइकलको ब्याट्रीको आकार हो। छायाँमा अधिकतम °० डिग्री सेल्सियसको साथ सजिलो चिसोको लागि सिफारिस गरिएको स्थान अगाडि ग्रिल र शीतलक रेडिएटरको बीचमा कारको अगाडि हुन्छ।
कार र एसयूवी बीचको भिन्नता?
कारहरूको लागि आईएक्स सबैभन्दा सानो हो १२२ मिलिमिटरको उचाईको साथ र सबै सवारीमा राख्न सकिन्छ। X १ slightly२ मिलिमिटर भन्दा थोरै अग्लो छ र दुबै कार र SUV का लागि उपयुक्त छ।
म्याकेनिक प्लग 'एन' प्ले र DIY स्थापना गर्न कति खर्च हुन्छ?
प्लग 'एन' प्ले आरोहण / फिटिंग को सबै मा एक HHO X-CELL किट किन्नु सवारी सजिलै तपाई द्वारा कुनै पनि यांत्रिकी बिना गर्न सकिन्छ। हाम्रो अनुमान छ कि प्लग 'एन' प्ले असेंबली / फिटिंग १ 15 मिनेटदेखि minutes० मिनेट सम्म रहनेछ।
DIY सबै विद्युतीय कनेक्टर्स, केबलहरू, pin पिन रिले, PWM एएमपी बूस्टर, फिटिंग्स, होजहरू, 5-in4 ब्लू डिस्प्ले र स्मार्ट एलसीडी रिले बिनाको स्थापना आवश्यक छ। स्थापनामा -1--3 घण्टा लाग्न सक्छ, केहि केसहरू दिनहरूमा, र अन्तमा तपाईंलाई एक पेशागत म्याकेनिक चाहिन्छ जो यस काममा रुचि राख्छ। DIY इलेक्ट्रिसियनहरूको लागि सिफारिश गरिन्छ जसले यो एक शौकको रूपमा आनंद लिन्छन्।
यदि म ix400 सानो 2231cc ईन्जिनमा प्रयोग गर्छु। यसले इन्धनको अर्थव्यवस्था र कार्बन सफाईमा के फरक पार्छ?
केवल कार्बन सफाई राम्रो गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ धेरै एम्पायरहरू द्वारा उत्पादित धेरै हाइड्रोजन ग्यास छ भने, त्यहाँ सबै ईन्जिन र अल्टरनेटरहरूमा ईन्धन बचत बिना थर्मोडायनामिक कानुनसँग तत्काल द्वन्द्व हुन्छ। केवल धेरै कम amps राख्नुहोस्!
Down वा move-गति स्वचालित प्रसारणको साथ डाउनहिल किन सार्ने?
यदि ईन्जिनमा or वा of को उच्चतम गिअर अनुपात छ भने, २.२L डिजल ईन्जिन १००० - १ 4०० RPM बीचको सुस्त गतिमा चल्नु पर्छ। यो ट्रिकले डाउनहिल ड्राइभिंग गर्दा तटस्थसँग संयोजनमा पनि काम गर्दछ। सँधै शीर्ष गियर र सबैभन्दा कम गतिको साथ ड्राइभ गर्नुहोस् जुन ईन्धन अर्थव्यवस्थाको लागि उत्तम हो।
कारमा रहेको कम्प्युटर चिपलाई कसरी हटाउने?
हामी उच्च मार्गमा सबै भन्दा राम्रो ईन्धन खपतको लागि ECU धोका गर्दैनौं। हामी आईएक्स 3.9०० द्वारा उत्पन्न गरिएको ग्यासको थोरै मात्राको थप सहित Lexus 100L / १००km पुगेको छ।
हाम्रो HHO X-सेल किटहरू धेरै कम 300 एमएएमपीको साथ काम गर्दछ र यो थर्मोडायनामिक कानून अनुकूल छ। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं केवल सफा वा खराब सेन्सर बदल्नुहोस्। प्राय: जहिले इन्जेक्टरहरूमा वाशरको मुनि मात्र चुहावट हुन्छ जसले मर्मत गरे पछि अधिकतम बचतको लागि हाइड्रोजन ग्यास प्रयोग गर्न आमूल सहयोग गर्दछ।
भिडियो यहाँ हेर्नुहोस् www.HHOmercedes.com or www.HHOlexus.com
यदि तपाईं एचएचओ एक्स सेलको साथ शहरमा ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने, हाम्रो नयाँ बचत गर्ने चिपले ईन्धनको खपत १ dra - २०% सम्म घटाउन सक्छ। १००% ग्यारेन्टीको साथ। थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस्।
इन्धन बचत गर्न A-१०-१-5--10० ए भन्दा बढि एम्प औसत सेट अप गर्नु राम्रो हुन्छ?
होईन, हामीले धेरै तटस्थ प्लेट हाइड्रोजन जेनरेटरहरू परीक्षण गरेका छौं जस्तै एचएचओ ड्राई सेल १A ए र A० ए भन्दा माथि ईपुट बचत बचत बिना। तर जब हामीले तटस्थ प्लेटहरू हटाएर एएमपी - PWM एम्पलीफायर प्रयोग गरी 15००mA / 30A मा मात्र इनपुट सेट गर्‍यौं, तब उत्तम ईन्धन खपत र बढी शक्ति प्राप्त गरियो। सबैको कुरा सुन्नुहोस्, ईन्धन बचाउने चाल केवल थर्मोडायनामिक्सको नियम तोड्नु होइन। यदि तपाई अल्टर्नेटरबाट धेरै धेरै एम्पियरहरू (वर्तमान) प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले कहिल्यै बढी ईन्धन बचत गर्नुहुन्न।
इञ्जिन बन्द हुँदा बबलर पानी किन पानीको ट्या tank्कीमा फर्कन्छ?
सामान्यतया, जब इन्जिन बन्द हुन्छ, बबलर पानी पानी ट्या tank्कमा फर्किन्छ। त्यहाँ एक सानो भ्याकुम छ त्यसैले बुलबुले पानी फेरि मुख्य एकाइमा चुस्नुभयो। बबलर विशेष गरी DRY CLL जस्ता अत्यधिक तापक्रमका लागि डिजाइन गरिएको हो। एचएचओ एक्स-सेलको मामलामा आवश्यक छैन तर छाया 50० डिग्री सेल्सियस छ यदि मध्य पूर्वी जस्तो उनीहरूको बुलबुले तातो पानी वाष्पीकरण गरेर धेरै चाँडै भरिन्छ। त्यसैले ब्याक-अप प्रकार्य महत्त्वपूर्ण छ हरेक पटक ईन्जिन बन्द हुँदा।
धेरै एचएचओ डीलरहरू कुनै प्रमाण बिना नै दाबी गर्छन् कि अक्सिजन सेन्सरलाई ठग्दा उनीहरूले कम ईन्धन खान्छन् (कि म्याकेनिकल वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा भोल्टेज १ वीमा परिवर्तन गरेर)।
हो, तपाईंसँग कम ईन्धन हुनेछ, तर मात्र तटस्थ, र ईन्जिन मर्नेछ पुरानो ब्याट्रीको साथ पुरानो अल्टरनेटर र गाडीका अन्य सबै उपकरणहरू चार्ज गर्दा। यो २--2 पटक नराम्रो उत्सर्जन जारी रहन्छ र अपर्याप्त दहनको कारण हेड गस्केटको लागि पनि खराब हुनेछ। जब तपाईं ड्राइभ गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई थप रभहरू चाहिन्छ किनभने त्यहाँ कम पावर उपलब्ध छ, त्यसैले तपाईं उही ईन्धन खपत पाउन सक्नुहुन्छ खराब प्रदर्शनको साथ र ईन्जिनको जीवन काल काट्ने। Lambda सेन्सर ह्यान्डलिंग मात्र समझको हुन्छ यदि तपाईंसँग शुद्ध हाइड्रोजन (वा LPG) को एक स्वतन्त्र स्रोत छ ग्यास उत्पन्न गर्न को लागी १००% उर्जा प्रयोग नगरी।
कसरी राम्रो ईन्धन खपत गर्ने?
तपाईंलाई धैर्यता चाहिन्छ। उत्तम ईन्धन खपत गर्न यो सजिलो छ। केवल उत्तम ईन्धन अर्थव्यवस्थाको लागि ड्यासबोर्डमा परीक्षणहरू र वाचहरू हेर्नुहोस्। कम्प्युटरले तपाईंलाई कसरी देखाइरहेको छ तपाईं कसरी राम्रो र नराम्रो ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। बत्ती र फ्यान सहित सबै विद्युत उपकरणहरू विच्छेद गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो रेकर्ड को लागी गर्मी मा छ तर यदि तपाईं जाडो छ भने तपाईं गणना गर्न सक्नुहुन्छ -1,5l ECU वा lambda धोका छैन! HHO X-CELL का साथ अधिकतम प्रदर्शनमा ईन्धनको गुणवत्ता राख्नुहोस्।
के एचएचओ ग्यासले लेम्बडा अक्सिजन सेन्सरमा कुनै प्रभाव पार्छ?
होइन किनभने हाइड्रोजन र अक्सिजनको दहनले अक्सिजन बिना मात्र शुद्ध अक्सिजन-मुक्त पानी उत्पादन गर्दछ।
तपाईंलाई धैर्यता चाहिन्छ। उत्तम ईन्धन खपत गर्न यो सजिलो छ। सडक १ 15 किमि एक तर १ and किमी पछाडि परीक्षणको लागि जानुहोस् र उत्तम ईन्धन अर्थव्यवस्थाको लागि ड्यासबोर्डमा हेर्नुहोस्। कम्प्युटरले तपाईंलाई देखाउनेछ जहाँ तपाईं राम्रो र नराम्रो ड्राइभिंग गर्दै हुनुहुन्छ। बत्ती र फ्यान सहित सबै विद्युत उपकरणहरू विच्छेद गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो रेकर्ड को लागी गर्मी मा छ तर यदि तपाईं जाडो छ भने तपाईं गणना गर्न सक्नुहुन्छ -15l ECU वा lambda धोका छैन! HHO X-CELL का साथ अधिकतम प्रदर्शनमा ईन्धनको गुणवत्ता राख्नुहोस्।
के एक हाइब्रीड ईन्धन प्रणाली रस्ट वा जंगको लागि अधिक प्रवण छ?
होइन। जीवाश्म ईन्धन [ग्यास वा डीजल] हाइड्रोजन वाष्पीकरणको लागि दहनको दौडान पर्याप्त तातो उत्पादन गर्दछ किनकि यसले पानीमा परिवर्तन गर्दछ र निकास प्रणालीबाट बाहिर निस्कन्छ।
के यो प्रणालीले मेरो प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछ?
हो, तपाईंको आन्तरिक दहन इञ्जिनमा हाइड्रोजनको इन्जेक्शनले ईन्जिन चल्दा आन्तरिक भागहरू सफा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले टोक़ र हार्सपावर बढाउनेछ र हाइड्रोकार्बन प्रदूषकहरू लाई कम गर्दछ तपाईंको हावामा हाल निकास गरिएको माध्यमबाट। हाइड्रोजन तपाईंको ईन्जिन भित्रको ग्यास वा डीजल भन्दा राम्रो र क्लीनर पोख्छ। यसले तपाईंको सवारी चलाउन सहज बनाउँदछ, लामो, कूलर, र पहिले भन्दा बढी कुशलतासाथ।
के यो डिजल, पेट्रोल सवारीसँग काम गर्दछ?
हो, यो आन्तरिक दहन इञ्जिनका साथ सबै गाडीहरूमा काम गर्दछ।
के हाइड्रोजन जेनेरेटरले मेरो ईन्जिनमा कुनै छोटो वा दीर्घकालीन हानी निम्त्याउँछ?
होईन, हाइड्रोजन जेनरेटरले ईन्जिनहरूमा कुनै समस्या उत्पन्न गर्दैन।
कस्तो प्रकारको नियमित रखरखाव संलग्न छ?
आवश्यकता अनुसार पानी ट्यांकीलाई डिस्टिल्ड पानीले भर्नुहोस्। प्रत्येक १००० किलोमिटर तपाईंलाई १ लिटर पानी चाहिन्छ र अलिकति इलेक्ट्रोलाइट थप्नुहोस्। प्रत्येक छ महिनामा, प्रयोगको मात्रामा निर्भर गर्दै, यसलाई निकास र प्रणाली फ्लश गर्न र ताजा आसुत पानी र इलेक्ट्रोलाइट उत्प्रेरकको साथ प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरिन्छ।
इलेक्ट्रोलाइट के हो?
सबै भन्दा राम्रो इलेक्ट्रोलाइट KOH (पोटेशियम हाइड्रोक्साइड) हो। धेरै सस्तो र फेला पार्न सजिलो।
के हुन्छ यदि मैले डिओनाइज्ड - डिस्टिल्ड पानी मेरो जेनेरेटरमा प्रयोग गर्दिन?
आसुत पानी मूलतः शुद्ध पानी हो। पानीका अन्य प्रकारहरू जस्तै धारा पानी, खनिज पानी, पोखरीको पानी, समुद्री पानी, आदि, काम गर्दछ तर ती पनि चाँडै इलेक्ट्रोलाइट "मैला" हुने पानी मा खनिज र अशुद्धता को कारण हुनेछ। हिलो इलेक्ट्रोलाइट जेनरेटर प्लेटहरूमा निर्माण गर्दछ र एक इन्सुलेटरको रूपमा कार्य गर्दछ जसले गर्दा हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनले पीडित गर्दछ ...
यही कुरा धेरै अन्य प्रकारका उत्प्रेरकहरूका लागि पनि लागू हुन्छ, विशेष गरी सोडियम युक्त कुनै उत्प्रेरक, जस्तै बेकिंग सोडा वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियमले द्रुत रूपमा इलेक्ट्रोलाइजर प्लेटहरू दूषित गर्नेछ र युनिट अप्रभावी बन्छ।
हिउँद winter30 ° C, -22.0 ° F को बारेमा के हुन्छ?
जब कुनै कडा शीत १०-२10 डिग्री सेन्टिग्रेड तल आउनुपर्दछ र तपाईले एचएचओ मुख्य इकाई कसरी to०% -25०% अन्तर्गत तयार पार्ने भन्ने कुरा जान्नुहुन्न, क्षति रोक्न पोर्टेबल एचएचओ किट बिच्छेदन गर्नुहोस् र हटाउनुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी हुनेछौं। तपाईंलाई नि: शुल्क जानकारी प्रदान गर्न पाउँदा खुशी छ।
सुख्खा KOH १० मिलीलीटर देखि m० मिलीलिटरको इलेक्ट्रोलाइट, HHO किटको खण्ड र प्रकारमा निर्भर गर्दै, लगभग सेट गरियो। -10 / -30 ° C प्रत्येक १०० मिलीलीटर पानीको लागि थप m० मिलीलीटर सुख्खा KOH थपियो भने इलेक्ट्रोलाइट--० डिग्री सेल्सियस सम्म स्थिर हुँदैन।
तपाईं पहिले फ्रीजरमा भण्डार गरिएको सानो कपमा प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
वैकल्पिक एन्टिफ्रिज समाधान: पानी-isopropyl मदिरा मिश्रण मिसि। बिन्दु निराश छ। यसको अलिकता तीतो स्वाद छ र पिउन सुरक्षित छैन। आइसोप्रोपाइल रक्सी धेरै घट्ने तापक्रम र ° ° ° डिग्री सेल्सियस (−१२° free एफ) मा ठण्डसँगै बढि चिसो हुन्छ
एचएचओ सेल एन्टिफ्रिज र डिटर्जन्टको लागि एक additive को रूपमा। 99.99% isopropyl रक्सी थप्नुहोस् यदि तापक्रम--०- -०- below० डिग्री तल झर्छ भने। Isopropyl रक्सी तपाईंको HHO प्रणालीको लागि पूरक हो जसले पानीलाई जमिनबाट रोक्छ - 30०% देखि -50०%। आइसोप्रोपानोल प्राकृतिक घरेलू उत्पादनहरू गिराउन र सफा गर्न, एन्टिफ्रिजमा क्रिस्टलीकरणका लागि विलायक, धुलो थप्ने पदार्थ, पसीना तह, र फ्याट लेयर कृत्रिम नाखाहरू र अधिक हटाउनको लागि आदर्श हो।
चेतावनी: ईन्जिन सुरू गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि नलीलाई बरफले अवरुद्ध गरेको छैन, खराब एक तर्फी भल्भ स्थिति, वा अनुचित स्थापनाको कारण उत्पन्न भएको भाँडाको नली। HHO ग्यासको लागि आउटपुट रोक्दा अपरिवर्तनीय रूपमा HHO मुख्य इकाई नष्ट गर्दछ र बदल्न वा फिर्ता गर्न मिल्दैन।
के हाइड्रोजन जेनरेटर विस्फोट गर्न सकिन्छ?
होइन। हाइड्रोजन उत्पादन माँगै बनेको छ। तपाईंसँग हाइड्रोजन मात्र हुनेछ जब तपाईंको कार चलिरहेको छ। प्रेशर गरिएको ग्यास ट्याks्की जस्तो नभई प्रणालीमा हाइड्रोजन दबाबको थोरै मात्र मात्रा हुन्छ।
यदि मसँग प्रश्नहरू छन् भने मेरो हाइड्रोजन जेनेरेटरको लागि कुनै टेक समर्थन छ?
हो, HHO समर्थन तपाईको HHO KIT HHO सेट HHO ग्यास जेनरेटर को लागी प्रदान गरीन्छ।
एक दुर्घटना को मामला मा हाइड्रोजन जेनरेटर उड़ा हुनेछ?
बिल्कुल होईन, तपाईंसँग सबै भूमिमा पानी र इलेक्ट्रोलाइट हुनेछ।
के हामी एक पावर जनरेटरमा हाइड्रोजन जेनरेटर प्रयोग गर्न सक्दछौं?
जेनरेटर कुनै पनि बिजली जेनरेटर मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जीवनका उत्पादनहरू के हुन्?
आजसम्म हामीसँग इकाईहरू बेचेका छन् still बर्षमा अझै अपरेटिंग छ।
के तपाइँसँग एक पुनर्विक्रेता वितरण कार्यक्रम छ?
हो, यदि तपाइँ हाम्रो बिक्रेता बन्न चाहानुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
किन तपाईको किटहरु अरु भन्दा कम खर्च गर्छन्?
यो किनभने हामी उत्पादन गर्छौं र हाम्रा सबै उत्पादनहरू उत्पादन गर्छौं। उत्पादित इकाईहरूको ठूलो मात्राको कारण, हामी धेरै राम्रो डिलमा ठूलो मात्रामा सामग्रीहरू किन्न सक्छौं र हाम्रो उत्पादनलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्छौं र बचतलाई तपाईंमा पठाउन सक्छौं। त्यहाँ हामीलाई उत्तम उत्पादनहरू प्राप्त गर्न कुनै मतलब छैन यदि यो यति महँगो छ कि औसत उपभोक्ताले यसलाई वहन गर्न सक्दैन।
के म मेरो कारमा ठूलो HHO KIT HHO सेट HHO ग्यास जेनेरेटर प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईं आफ्नो कारको लागि तत्काल माथिको मोडल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जनरेटरको आयु धेरै वृद्धि हुनेछ। मोडेलहरू बीचको सानो मूल्य फरकको लागि यो राम्रो लगानी हो।
कुन सुरक्षा उपकरणहरू किटमा छन्?
हामीले किटमा एक बबलर र गैर-फिर्ती चेक वाल्भलाई कुनै पनि क्षति रोक्न यदि इञ्जिन ब्याकफायरहरू समावेश गर्दछ भने। बबलरले ईन्जिनमा पठाइएको ग्यासबाट elecvapourte बाष्पको कुनै पनि ट्रेसहरू पनि धुनेछ।
Cvapouruse कुनै प्रकारको पानी?
यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं आसिल वा विआयनीकृत पानी प्रयोग गर्नुहोस्।
ट्या often्कमा पानीको सतह कति पटक जाँच्नु पर्छ?
प्रत्येक चोटि तपाईले आफ्नो कारलाई पूरै ईन्धन ट्या fill्कमा भर्नुहुन्छ भनेर जाँच गर्नुहोस्।
HHO KIT HHO सेट गर्नुहुने HHO ग्यास जेनरेटरले मेरो गाडीको वारेन्टी शून्य स्थापित गर्दछ?
होइन। यो एक add-on उपकरण हो जुन सजीलै हटाउन सकिन्छ। तपाईं ईन्जिन वा कम्प्युटर परिमार्जन गरिरहनु भएको छैन तपाईंको HHO KIT HHO सेट HHO ग्यास जेनरेटरहरूले तपाईंको ग्यारेन्टी शून्य गर्दैन।
म मेरो निर्देशन पुस्तिका कहिले प्राप्त गर्दछु?
तपाईं मैन्युअल डाउनलोड पृष्ठमा तुरून्त नि: शुल्क पहुँच पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंले गल्तिले पेज छोड्नुभयो वा ब्राउजर बन्द गर्नुभयो भने, हामीलाई मात्र एउटा इ-मेल पठाउनुहोस्।
के HHO इंजेक्शनले टर्बोको साथ सवारी साधनहरूमा काम गर्दछ?
हो। HHO KIT HHO जेनरेटरहरूले टर्बोचार्ज्ड ईन्जिनहरूमा काम गर्दछन्। मात्र टर्बोचार्जरको अघि HHO ग्यास इन्जेक्स गर्न निश्चित गर्नुहोस्, पछि होईन।
कति प्लेट प्लेटहरू वास्तवमै HHO ग्यास उत्पादन गर्दछ?
यी आधुनिक HHO X-CELL उपकरणहरू बेकार तटस्थ प्लेटहरू बिना काम गर्दछन् HHO ड्राई सेलहरूमा जस्तो कि केवल धेरै ठाउँ लिन्छ। केवल क्याथोड र एनोड प्लेटहरूले HHO ग्यास उत्पादन गर्दछ। HHO X-CLL स्लिम मात्र 4.5. cm सेमी भनेको बहु कोरहरू + र - उच्च गुणस्तर INOX A4 स्टेनलेस स्टील 316१25 एसएस प्लेटहरू पुरानो HHO ड्राई सेलहरू (२ cm सेमी फ्याट) जस्ता छन्, तर HHO जेनरेटरको आकार पाँच गुणा पातलो छ। । यसले कुनै पनि आधुनिक गाडीमा चढ्न सजिलो बनाउँदछ जहाँ HHO ड्राई सेलको लागि ठाउँ छैन। पीडब्ल्यूएम एएमपी बूस्टर एचएचओ फैक्टरी कं द्वारा विकसित, लिमिटेड आयरल्यान्ड दक्षता times पटक वृद्धि गर्दैछ। अर्को लाभ सबै समयमा चिसो छ त्यसैले कुनै स्टीमिंग र अतिभारित छैन। इन्धन पानीको दायरा -5०००--3000००० किलोमिटरसम्म फैलिएको छ (एचएचओ ड्राई सेलमा केवल 5000००-१००००km छ)।
नाम इमेल फोन नम्बर सन्देश